Ngaba ikhona i-Benzene enobuhlungu kwiimoto ezigadiweyo?
I-Benzene ne-Cared Cars
Lo myalezo wentsholongwane uthi amabangaphakathi emoto anesimo esinobuhlungu besenza-benzene yomhlaza esivezwa ngama-dashboards, izihlalo zeemoto, kunye ne-air fresheners, kwaye uncoma iifestile zokuvula ukugxotha igesi ye-benzene ngaphambi kokuba uguqule imoto ye-air conditioner. Ngaba yinyaniso okanye ingamanga?
Ukujikeleza ukususela ngoMeyi 2009
Isimo: Ubuninzi benyaniso / Ukugqithisa (jonga iinkcukacha ezingezantsi)
Umzekelo: Umbhalo we-imeyile :
Imoto A / C (Umoya) MELE UFUNDE !!!
Nceda ungavuli i-A / C ngokukhawuleza xa ungena kwimoto.
Vula iifestile emva kokufaka imoto yakho kwaye uvule isimo se-air emva kwemizuzu embalwa.
Ngokomphando, ideshibhodi yemoto, i-sofa, i-air freshener ikhupha i-Benzene, i-Cancer ebangela i-toxin (i-carcinogen - thatha ixesha lokubona iphunga leplastiki epholileyo).
Ukongeza ngaphezu kokubangela umdlavuza, i-Benzene ihlamba amathambo akho, ibangela i-anemia kwaye iyanciphisa iiseli ezimhlophe zegazi.
Ukubonakaliswa kwexesha elide kuya kubangela i-Leukemia, eyandisa ingozi yomhlaza. Ngamana kungabangela ukukhulelwa kwesisu.
Izinga le-Benzene elamkelekileyo ngaphakathi kwi-50 mg nge-sq. Ft.
Imoto emiswe ngaphakathi kwiifestile ezivaliweyo iya kuba ne-400-800 mg ye-Benzene. Ukuba zimile ngaphandle kwelanga phantsi kweqondo lokushisa elingaphezu kwama-degrees ama-F, i-Benzene level iya phezulu ukuya ku-2000-4000 mg, amaxesha angama-40 eyamkelekileyo yezinga ...
Abantu abangena emotweni, ukugcina iifestile zivaliwe kuya kuphazamiseka, ngokulandelelana ngokukhawuleza kwexabiso le-toxin.
I-Benzene yi-toxin echaphazela intsholongwane yakho nesibindi. Okubaluleke ngakumbi, kunzima kakhulu umzimba wakho ukugxotha izinto eziyingozi. Ngoko bahlobo, nceda uvule iifestile kunye nomnyango wemoto yakho-nika ixesha lokungena ngaphakathi emoyeni-gxotha izinto ezibulalayo - ngaphambi kokuba ungene.
Nangona engekho ikhulu leepesenti zobuxoki, umbhalo ongentla ungumgca wolwazi olungengcaciso. Musa ukuyikrokra.
Ukuqala ngokusekelwe kwizinto ezisisiseko, yinyaniso ukuba i-benzene yikhemikhali enobungozi eyaziwayo ukuvelisa imiphumo eyahlukileyo yempilo, kubandakanya i-anemia kunye nomhlaza (i-leukemia ngokukhethekileyo) kubantu.
Ixabiso lenzeke kokubili ngokwemvelo (ngokuyinxalenye njengengxenye yesoyile engcolileyo) kunye nokuveliswa kwemisebenzi yabantu, umzekelo njengenxalenye yeemveliso zepetrolium (ezifana ne-petroli) kunye nemveliso eyenziweyo usebenzisa i-benzene njengesiqulatho (njengama-plastiki, i-synthetic iimbombo, idayi, i-glues, i-detergents, kunye neziyobisi). Kwakhona kubangelwa ngumsi wocuba.
Amanqanaba aphantsi ka-benzene ayenokubonakala ngaphandle emoyeni ngenxa yokungcola kweemoto kunye nokukhutshwa kwembane. Ngombulelo kwimiphunga ekhutshwa yimveliso yasendlini efana nemigca, iipende, kunye nefenitshala yefenitshala, ngamanqanaba aphezulu aseBenene ngamanye amaxesha afunyanwa ngomoya wangaphakathi, ngakumbi kwizakhiwo ezintsha.
Ngaba iibhashi zeebhasi, iipaneli zemizi, izihlalo kunye nezinye izinto zangaphakathi ziphuma ebhenene, njengoko zifunyenwe kwi-imeyile? Okunokwenzeka. Kwizinto ezininzi zeemoto, ezi zinto zenziwa kwiiplastiki, iingubo zokwenziwa, kunye nemigca, ezinye zazo zenziwa nge-benzene. Ngokwezinzululwazi, izinto ezinjalo zingenza "i-off-gas" zilandelelanise ubungakanani beBenene, ngokukodwa kwimeko yezulu eshushu.
Ngokuphathelele imoto ye-air fresheners, kukho ulwazi oluthile oluxabisekileyo olutholakalayo malunga nezithako, nangona uphando lwaseYurophu lufumene ukuba ezinye iindlu zomoya zenza izinto ezilinganiselweyo ze-benzene. Akunakwenzeka ukuba ezinye iimoto zomoya zihlaziye, nazo.
Umbuzo obalulekileyo yimalini? Ngaba zonke ezi zinto ziyakwazi ukukhupha i-benzene ngokwaneleyo ukulimaza impilo yakho?
Oko iNzululwazi zithetha
Uninzi lwezifundo ezishicilelwe apho amanqanaba eBenene ayelinganiswa ngaphakathi kwezithuthi zabagibeli zenziwe phantsi kweemeko zokuqhuba, kwimizila. Ngoko, ngelixa izifundo ezinjalo zifumene ngokwenene ukuba amanqanaba e-benzene emotweni angadlula ngokugqithisileyo ngaphandle kweso sithuthi, kwaye ingafaka ingozi yempilo yabantu, oku kubangelwa ukuba kubakho ukungcola.
Kwakhona, iimali zeBenene ngokwenene ezifunyenwe ngabaphandi, nakuba kubalwa amaninzi, zibaninzi, zincinci kuneemali ezibhalwe kwi-imeyile. Uphononongo luka-2006 olushwankathela zonke iinkcukacha eziqokelelwe kuze kube yimhla zixelwe kumanqanaba e-benzene emotweni ekukhuphekeni imfucu ephuma kwi .013 mg ukuya kwi -56 mg nganye ngeekhiyitha yamitha- ukude kakhulu ukusuka ku-400 mg ukuya kwi-4,000 mg ngeenyawo zesikwere ( unyawo?) kubikwe kwi-imeyile.
Amanqanaba eBenzene kwiimoto eziPakiweyo
Kwisifundo esisodwa , sakwazi ukufumana amanqanaba e-benzene alinganisiweyo ngaphakathi kweemoto ezimiweyo kunye neenjini zabo ziyacinywa.
Iziphumo zazingenangqondo. Izidakamizwa zithatha iisampulu zomoya ngaphakathi zombini kunye nesithuthi esisetyenziswa phantsi kweemeko ezinjengobushushu bokukhanya kwelanga, ukulinganisa amanqanaba e-organic compounds (VOCs) kuquka i-C3- ne-C4-alkylbenzenes, kunye nokutyhila iiseli zabantu kunye nezilwanyana kwiisampuli ukuze zichongwe zabo zetyhefu. Nangona ubukho obubonakalayo be-VOC (ubuncinane be-10.9 mg nganye ngemitha yeekhiyubhi kwimoto entsha kunye no-1.2 mg nganye ngemitha yeekhiyibhi kwimoto endala), akukho miphumo enobungozi yabonwa. Ngaphandle kokuqwalasela ukuba kunokwenzeka ukuba abantu abanokungenwa yintlungu bafumane ukuba imeko yabo iyancipha ngokubakho kwiindawo ezinjalo, uphando luphelile ukuba "akukho nengozi yempilo yomoya omileyo ngaphakathi."
Xa ungathandabuzeki, Ventilate
Nangona oku kufunyanwe, abanye abaqhubi banokukhathazeka malunga nokuba kukho nawuphi na umphunga we-benzene ngaphakathi kweemoto zabo, ngokukodwa ukunika isikhundla sokuba iNational Health Organization ithi "akukho nqanaba elikhuselekileyo lokungcola" kwi-carcinogen.
Basenokukhathazeka, nge-email isilumkiso ngasentla, ukuba ukuguqula isimo se-air conditioner kungenza kube nzima ukufudumala kwi-toxins ngokuphindaphinda umoya ococekileyo. Ukuba kunjalo, akukho monakalo eyenziwe-kwaye uxolo olukhulu lwengqondo luya kufumaneka-ngokuvula nje iiifestile kwaye uphefumle imoto ngaphambi kokuyijika.
> Imithombo kunye nokuFunda okuqhubekayo
> Benzene Facts. Amaziko okuLawula nokuLawula izifo, ngo-22 Februwari 2006.
> Utyhefu lweMoto yeMoto yeNdalo yangaphandle. INzululwazi yendalo kunye neThekhnoloji , 2 kuMatshi 2007.
> Le Ntsha entsha yeTransfer? Ayiyingozi, iFund Find. LiveScience.com, 6 uEpreli 2007.
> I-Benzene kunye neeMethyl zayo. Ukuphulukiswa kwamanqanaba okuPhumela okuPhezulu kwiiMoto: IiNcwadi zoTywala , ngo-5 kuJanuwari 2006.
> Iingcamango zeMicimbi ye-Organic kwi-Side Side and Seat Seat of Automobiles. I-Journal ye-Analysis Exposure kunye ne-Environmental Epidemiology , ngoMeyi-Juni 1999.
I-SCAM: "I-Anaconda enkulu ikhupha i-Zookeeper" Ividiyo
FW: Kwaye bathi FAT iyingozi ...
I-SAT ye-Chemistry Information Test Test
IsiCatshulwa Inkcazo kunye nemizekelo
Yiyiphi iTown Tross?
'I-Rose for Emily': Yintoni ebalulekileyo ngesihloko?
Kutheni uJohn Adams Wavikela uKaputeni Preston Emva kokubulawa kweBoston?
Yintoni Eyenza Umculo Uzuze?
Izinzuzo zezeMpilo zeCuba yoTuba - iiCigars kunye neMicrothe
Imbali Engqalileyo Yomfazi Omkhulu KwamaQuquki